Abavelisi abambeke nge-ASAY AST, i-grafutitite yomzi-mveliso, i-Silicon Carbide i-Wholedale-Xtlceramic
Intambo yemveliso ezenzekelayo
Ukwenza umgangatho wokuphela
Njengomvelisi onamandla ovelisileyo we-assay ocekeceke ngeCupel, sine-7000 yoma-7000 isikwere isakhiwo semizi-mveliso entsha yomzi-mveliso kunye nomgca ozenzekelayo wemveliso.
Zonke zifakwe ngokwemigangatho yehlabathi yamazwe aphesheya.
Uyisebenzisa njani isilawuli
Uninzi lubandezeleke ngotshintsho ngenye indlela, ngokuhlekisa, amagama angajongi kangako.
● Iisampulu zasimahla
Akukho zinto zibalulekileyo.
●Inkonzo ye-OEM / ODM
Sinike inkonzo ye-OEM / i-ODM iminyaka engaphezu kwe-13, kwaye sinokwenza imveliso enemizobo yabathengi, kwaye inokufaka ukupakisha umthengi.
●Ukuhamba kwemveliso njengombala:
Siyinkampani edityaniswe ne-R & D, imveliso kunye nokuthengisa ngokupheleleyo
Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo yeklasi ye-Finde, ishishini elithembekileyo
Nxibelelana nabathengi bethu ngenxa yokumangalaIzaphulelo
Ukuba unxibelelana nathi ngoku ufuna iinkcukacha ezithe kratya, ungathatha iisampulu zasimahla.
I-Linying xing tai ekhethekileyo ye-ceraramic co., ltd.
Yasungulwa ngo-1997, ekhethekileyo kuphando kunye nophuhliso, ivelisa i-Assay yokuFumaneka kunye neCupel.
Iimveliso zisetyenziselwa uhlalutyo lwesinyithi oluxabisekileyo, ukuvavanywa kwemigodi, ukuvavanywa kwezimbiwa kunye nokunyanzela kwegolide. Izinto ezimbi ze-Assay zeShifys ziyiFireclay ezixutywe nezinye izinto zokwenza izinto, banokujamelana nobushushu ukuya kwi-1300 ℃. Banokuchasana ngokugqwesileyo ngokuchasene nohlaselo lwe-flux, ukhukuliseko, ukuqhekeza kunye nothuso lwe-thermal.
Inkampani ihlala ilandela ukusinda komgangatho, ubuchule kunye nophuhliso, ukuthembeka kophawu, ukukhusela kunye nokucinga kunye nenjongo yenkonzo yasemva kwentengiso njengenjongo. Kwiminyaka edlulileyo, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwilizwe lonke, kwaye zathunyelwa eJamani, e-United States, eBrazil, iRussia, uMgangatho ongaphezulu kwe-20, iNkonzo inconyiwe kakhulu ngabathengi.
"Umgangatho ophezulu, ixabiso elikhethekileyo '' lulawulo lwethu. Silindele ukubambisana nabantu basekhaya nabangaphandle, uphuhliso oluqhelekileyo! Wamkelekile ukutyelela kwaye uphande kwinkampani yethu.
Indlela yezithako ze-ASAY
Into yokuqala esiyenzayo kukudibana nabathengi bethu kwaye sithethe ngeenjongo zabo kwiprojekthi yexesha elizayo.
Ngeli xesha lentlanganiso, zive ukhululekile ukunxibelelana ngemibono yakho kwaye ubuze imibuzo emininzi.